यसका लागि मैले ब्याङ्कमा राखेका फिक्स डिपोजिट रकमका कागजपत्र र गत ३ महिनाको सेविङ्ग्स रकमको बयान, जीवन बीमा गरेका कागज आदि तयार पारेँ। अरू कोही हितैषीले भने.. ‘आवेदनकारी अमेरिकामा गएर आफ्नो नियोजित काम सकेर वापस फर्की आउने निश्चित हुन यहाँको सम्पत्ति, जागिर आदि भएको हुनु असल रे’। यसका लागि मैले मेरो विश्वविद्यालयबाट तलब प्रमाणपत्र पनि बोकें। अब सम्पत्तिको कागज कसरी मिलाऊँ घर र घडेरी दुवै मेरी श्रीमती (रञ्जना) को नाउँमा छ। घर बनाएको कागज गुवाहाटी म्युनिसिपल्टी कोर्पोरसोनबाट मिलाएँ। भिसा अन्तर्वार्तामा श्रीमतीको नाउँमा भएको घडेरीको कागज लगेँ भने मलाई सोध्ला 'रञ्जनासँग तेरो भएको सम्बन्धको प्रमाण पत्र खोइ?' त्यसो भए मैले अब रञ्जनासँग २८ वर्ष अघि गरेको विवाहको प्रमाणपत्र बनाउनु पऱ्यो। हे प्रभु, कस्तो फसाद !
यस विषयमा गुवाहाटी हाइकोर्टका नामी अधिवक्ता जयन्त पराजुलीसँग सल्लाह गरेँ। उनी मेरा आत्मीय हुन् सानैदेखिका नजिकको साइनो पर्ने। जवाब दिए- "मामा, केही सुर्ताउनु पर्दैन। डी.सी. कोर्टमा रजिस्ट्रेसन गराई दिउँला। केवल विवाहको तस्बिर र निमन्त्रणपत्र भए भई हाल्यो, तर अलिक दिनको समय चाहिन्छ"। उनले कति सजिलै भनिदिए। तर आजभन्दा प्राय: तीन दशक अघि गरेको विवाहको तस्बिर र निमन्त्रणपत्र अहिले कहाँ पाउनु? प्राय: दुई दिन लगाएर घर छान मारेँ। आफन्तहरूलाई पनि फोन लगाएँ। तस्बिर त फेला पऱ्यो तर निमन्त्रणपत्र कतै पाइएन। अब के गरूँ? जयन्तलाई सूचना दिएँ। उनले जवाब दिए। 'सुर्ताउनु पर्दैन मामा, केही विकल्प गरौंला। हुन पनि हो। वकिलसँग सबै थोकको समाधानको व्यवस्था हुन्छ रे। उनको यो भरोसाले मेरो सुकेको मुख बल्ल रसाएर आयो ।
उनले भने जसरी नै अलिक दिनपछि हाम्रो रजिस्ट्रेसनको दिन आयो। रञ्जनालाई लिएर म डी.सी. कोर्ट पुगेँ। कार्यालयभित्र कुनै टेबलमा फर्म भर्नु, कुनैमा फिस तिर्नु, फेरि कुनैमा तस्बिर खिच्नु आदि कामहरू सकेपछि रञ्जनासँग मेरो विवाह भएको प्रमाणपत्र तस्बिरका साथ मेरो हात लागि हुन्छ। मलाई बल्ल थाहा लाग्यो कानुनी विवाह त यस्तो पो हुँदो रहेछ। न त बाजा-गाजा न त जन्ती नै! मलाई त यो कागजे बिहा खल्लो, बासी चिया खाएको जस्तो बेस्वादको लाग्यो। तर परिस्थितिको गाँठो खुकुलो भएकामा मन